अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कति पाउनेछन् तलब, कस्ता हुनेछन् सुविधा-भत्ता ? — Sanchar Kendra
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कति पाउनेछन् तलब, कस्ता हुनेछन् सुविधा-भत्ता ?
अमेरिकाका राष्ट्रपति यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पद हो । स्मरण रहोस्, साधारण सरकारी कर्मचारीजस्तै संघीय कानून अनुसार यो पदका पनि आफ्नै मर्यादा र सीमा निश्चित गरिएका हुन्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको तलब र उनका अन्य खर्च पूर्ण रुपमा कानूनले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । २० जनवरीमा शपथ ग्रहण गरेपछि जो बाइडेन अमेरिकाका ४६ औं राष्ट्रपति बन्नेछन् । एक राष्ट्रपतिको रुपमा उनको कति तलब हुन्छ र उनले कस्ता प्रकारको सुविधा पाउनेछन् यसबारे जानकारी लिऔं ।
न्यूयोर्कको वेबसाइट स्टाइ कास्टरका अनुसार अमेरिकी कानून (US Code 3) का अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिको वार्षिक तलब चार लाख अमेरिकी डलर हो । नेपाली मुद्राका अनुसार यो ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ हो । यसका साथै राष्ट्रपतिले ५० हजार डलरको वार्षिक महँगी भत्ता पनि पाउँछन् । यसबाहेक दुई लाख डलरको भ्रमण भत्ता पनि पाउँछन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसबाहेक वाषिर्क रुपमा मनोरञ्जनका लागि पनि भत्ता पाउने गर्छ । यो रकम १९ हजार लडर हुन्छ जसलाई उनीहले आफ्ना लागि र आफ्नो परिवारका लागि खर्च गर्न सक्छन् । यस्तै फर्स्ट लेडी अर्थात् राष्ट्रपतिकी श्रीमतीका लागि कुनै तलब तोकिएको हुँदैन ।
सन् १७८९ मा जर्ज वासिङ्टन संयुक्त राज्य अमेरिकाका पहिलो राष्ट्रपति बने, त्यसपछि पाँच पटक तलब वृद्धि भएको छ । पछिल्लो पटक सन् २००१ मा तलब २ लाखबाट चार लाख अमेरिकी डलरसम्म तलब वृद्धि भएको हो ।
राष्ट्रपतिका लागि तलब निश्चित भएपनि यो पदमा आसिन सबै राष्ट्रपतिले तलब स्विकार गरेका छैनन् । पोलिटिको (अमेरिकन पोलिटिकल जर्नलिजम कम्पनी) का अनुसार अमेरिकाका ३१ औं राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर सन् १९१७ मा छानिएपछि आफ्नो तलब अस्विकार गर्ने पहिलो राष्ट्रपति थिए । उनले आफ्नो तलब दानमा दिएका थिए ।
त्यसपछि ३५ औं राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी पनि सन् १९६१ मा छानिएपछि आफ्नो तलब अस्विकार गर्ने राष्ट्रपति बनेका थिए । सुरुमा केनेडी कांग्रेसका प्रतिनित्रि सभाका सदस्य थिए त्यसपछि राष्ट्रपति बने तर उनले दुबै पदका लागि तलब लिन अस्विकार गरेका थिए । उनले खर्चको रुपमा ५० हजार अमेरिकी डलर भत्ता स्विकार गरेका थिए । हूवरजस्तै केनेठीले पनि आफू राष्ट्रपति हुँदाको तलबलाई विभिन्न धर्मशालालाई दान दिएका थिए ।
स्मरण रहोस्, तलबका साथै राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा अन्य थुप्रै भत्ता पनि पाउने गर्छन् । यसबाहेक उनलाई लिमोसिन, मरिन वन र एयर फोर्स वनको सुविधा पनि प्रदान गरिन्छ । यसबाहेक राष्ट्रपतिले ह्वाइट हाउसमा निःशुल्क आवास प्राप्त गर्छन् ।
बिजनेस इन्साइडरका अनुसार कार्यकाल समाप्त भएपछि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति सरकारी खर्चमा रहन्छन् जसमा लगभग २ लाख डलरको वार्षिक पेन्सन, स्वास्थ्य सेवा, भुक्तानी गरिएको आधिकारिक यात्रा र एक कार्यालय पनि समावेश हुन्छन् ।
ट्रम्पकी छोरी टिफनीको ‘इन्गेजमेन्ट’ ह्वाइट हाउसमा
नाल्ड ट्रम्पकी कान्छी छोरी टिफनी ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा इन्गेजमेन्ट गरेकी छिन् । आफ्ना राष्ट्रपति पिताको कार्यकालको अन्तिम दिनमा उनले इन्गेजमेन्ट गरेकी हुन् । उनले माइकल बुलोससँग आफ्नो इन्गेजमेन्टको फोटो ट्वीटर अकाउन्टमा पनि सेयर गरेकी छिन् ।
मंगलबार ट्वीटरमा फोटो सेयर गर्दै टिफनी ट्रम्पले लेखेकी छिन्, ‘ह्वाइट हाउसमा ऐतिहासिक अवसरको उत्सव मनाउन पाउनु र आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउनु एक सम्मान हो, तर प्रेमी माइकलसँग गरेको इन्गेजमेन्ट भन्दा ती सबै सम्मानभन्दा विशेष छ । अब हामी हाम्रो जीवनको अर्को अध्यायका लागि खुशी छौं ।’
२७ वर्षकी टिफनी डोनाल्ड ट्रम्प र उनकी दोस्री श्रीमती मार्ला मेपल्सकी एक्ली सन्तान हुन् । रिपोर्टका अनुसार टिफनी जर्ज टाउन विश्वविद्यालयको कानून विद्यालयबाट स्नातक गरेकी छिन् । टिफनीका प्रेमी माइकल बुलोस २३ वर्षका छन् र उनी नाइजेरियाली उद्योगपतिका छोरा हुन् ।
स्मरण रहोस्, अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदबाट हटिसकेपछि डोनल्ड ट्रम्प आफ्नी श्रीमती मेलानिया ट्रम्प र परिवारसमेत ह्वाइट हाउस छोडिसकेका छन् । ह्वाइट हाउस छोडेपछि ट्रम्पका लागि जोइन्ट बेस एन्ड्रूजमा विदाई समारोह आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ ट्रम्पले अन्तिम पटक सम्बोधन गरे ।
विहानै १० बजे इटालियन राजदूतको ह’त्या भएपछि देशभर तनाव, सुरक्षा व्यवस्था कडा, कसले लियो घटनाको जिम्मा ?
फेसबुकले यसकारण बन्द गरिदियो सेनाको समाचार पेज
उड्नासाथ इन्जिनमा आगो लागेपछि युनाइटेड एयरलाइन्सको विमान आकस्मिक अवतरण, केछ अवस्था ?
बिरोध प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गो’ली चलायो, २० वर्षीय युवतीको मृत्यु, को हुन् उनि ?